असार ३० मा ‘फियरलेस माइण्ड रिसोर्सफुल लाइफ’ वर्कशप आयोजना हुँदै-Setoghar
असार ३० मा ‘फियरलेस माइण्ड रिसोर्सफुल लाइफ’ वर्कशप आयोजना हुँदै
कस्ता विषयमा केन्द्रित होला कार्यक्रम ?
साइकोसोसियल हिलिङ एण्ड मेडिटेसन सेन्टरको आयोजनामा यही आषाढ ३० गते शनिवार ‘फियरलेस माइण्ड रिसोर्सफुल लाइफ’ नामक वर्कशप आयोजना गर्न लागिएको छ । बालाजु स्थित बाइपास र माछापोखरी बीच अवस्थित देव विकास बैंक रहेको भवनको चौथो तल्लामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
उक्त वर्कशपमा डर कसरी विकास हुन्छ र यसलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? आत्मविश्वास कसरी बढाउन सकिन्छ ? मानवीय शरीरमा रोेग लाग्ने माध्यमहरु के हुन् ? साथै स्वास्थ्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ ? अधिकांश मानिसहरु आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्नुका कारणहरु के हुन् र विना अवरोध लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति कसरी अघी बढ्नु उपयुक्त हुन सक्छ ? व्यक्तिले सीमित दायराबाट माथि उठ्न सकेको खण्डमा कस्ता कस्ता कार्यहरु सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सक्छ ? भन्ने लगायतका विविध विषयवस्तुहरुमा उक्त कार्यक्रम केन्द्रित रहने कार्यक्रम आयोजक केशव थापाले बताउनुभयो । साथै कार्यक्रममा उपस्थित भई लाभ लिन समेत ऊहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रम सैद्धान्तिक विषयमा मात्र केन्द्रित नभई व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित हुनेछ । यो वर्कशप एनएलपी प्रविधिमा आधारित रहेको र नेपालको निम्ति नयाँ अभ्यासको रुपमा रहेपनि विश्वभर प्रचलनमा आइसकेको छ । अधिकांश सफल व्यक्तिहरु यस प्रविधिको अभ्यासबाट सफल बनिसकेका समेत छन् ।
शनिवार आयोजना हुने वर्कशपमा व्यक्तिमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरण तथा काउन्सिलिङ सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रुपमा रहनेछ ।
कार्यक्रमबाट छिटो र उपयुक्त निर्णय लिन नसक्ने व्यक्ति, जीवनोपयोगी सही मार्ग भेट्न नसकेका व्यक्तिहरु, कुनै व्यवसायमा नयाँ आउन चाहने व्यक्ति, संस्थालाई राम्रो तवरले हाँक्न चाहने व्यक्ति, व्यवसायलाई थप गति दिन चाहने व्यक्तिहरु, सफलताको लागि नयाँ आइडियाहरुको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरु, विद्यार्थी, उद्योगी, शिक्षक लगायत सबैले लाभ लिन सक्नेछन् ।
कार्यक्रमबारे थप जानकारीको लागि कार्यालय समयमा ०१–४२१२०७८ मा सम्पर्क गरी नाम दर्ता गराउन सकिनेछ । पहिले नाम दर्ता गराएका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथमिकताको साथ कार्यक्रममा सहभागि गराइने समेत बताइएको छ । यसैगरी मोबाइल नम्बर ९८५१००८५१७ मा सम्पर्क गरेर समेत थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
साथै छिट्टै नै यसै संस्थाको आयोजनामा आगामी महिना आकाशा हिलिङ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न लागिएको र यसको लागि समेत रजिष्टे«सन खुल्ला भएको केशव थापाले सेतोघर डट कमलाई बताउनुभएको छ ।